GT Avalanche 2.0 သည်စက်ဘီးကောင်းသလား။ - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > Gt valalanche2သုံးသပ်ချက် - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေများ
Gt valalanche2သုံးသပ်ချက် - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေများ
GT Avalanche 2.0 သည်စက်ဘီးကောင်းသလား။
အေးဆေးတည်ငြိမ်သောထိန်းချုပ်ထားသောသင်္ဘောသို့မဟုတ်ခရီးသည်အနေနှင့်၎င်းသည်အစိုင်အခဲ၊ သို့သော်လေးနက်သောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်ကျောက်ဆောင်အစိုင်အခဲသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းမဟုတ်ပဲအပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရန်AvalancheDisc ၏အတုံးအလှကုန်ပစ္စည်းများGTတစ် ဦး သင့်လျော်သေချာစွာခြေထောက်, အစိုင်အခဲစီးနင်းပေါ်တွင်တင်ကြပြီ။
GT Avalanche ဟာစက်ဘီးကောင်းသလား။
(သိသိသာသာတေးဂီတ) - စက်ဘီးတစ်စီးသာတပ်လို့ရရင်ဘယ်စက်ဘီးကိုဝယ်မှာလဲ။ မြို့ထဲတွင်သေးငယ်သောအရာဖြစ်ပြီးကျောက်တုံးဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့်၎င်း၏လမ်းကိုဖောက်နိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်ဘဏ်ကိုမချိုးနိူင်သော်လည်းလက်တွေ့ကျသောစက်ဘီးများသည်ဖိအားများအောက်တွင်မကျရောက်နိုင်သောလက်တွေ့ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်တာတွေအားလုံးရှိပေမယ့်သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာ။
GT က Avalanche 2020 အသစ်နှင့်အတူအဖြေရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သို့သော်လမ်းကြောင်းပေါ်နှင့်မြို့နှစ်မြို့လုံး၌ခြေတစ်ချောင်းတည်းဖြင့်၎င်းသည်မတ်တပ်ရပ်နေသလားသို့မဟုတ်ပြိုလဲသွားသလား။ (လုံ့လရှိသူဂီတ) ဟေးလူတိုင်း။ ကျွန်တော့်နာမည်ကဂျိုးဇက်ပါ။
ဒါကြောင့်ငါ၌ဤ GT Avalanche ကိုလအနည်းငယ်ကြာခဲ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါရရှိခဲ့ပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ GT အာရုံခံကိရိယာအကြောင်းငါ့ဆောင်းပါးကိုရေးပြီးတဲ့နောက်လူအများအပြားလာကြ ငါ့ကိုသွက်လက်ပြီးငါ GT hardtail ငါရသင့်သောထောက်ခံချက်တောင်း၏။ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရန်အစီအစဉ်မရှိသေးပါ။ ယခုတွင်ငါသည် GT hardtail တွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သဖြင့် GT အော့တေးအနေဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမှအကြံမပြုခဲ့ပါ။ စျေးကွက်ရှိအခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက GT ၏အမာကျောနံပါတ်များသည်ငွေအတွက်သာမဟုတ်ပါ။
ဤနည်းအတိုင်းအီးမေးလ်များစွာကိုဖြေဆိုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် GT ကိုဆက်သွယ်ပြီးစိတ်ပျက်စရာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ပြန်ရေးတဲ့အခါငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကြားရတော့ ပြီးတော့စက်ဘီးစဖွင့်အပြီးမှာနောက်တစ်ခါသူတို့ပြန်ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒါမှသူတို့ကငါ့ကိုဒီနည်းနဲ့သတင်းပို့နိုင်မယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့ဝေမျှမယ်။
စက်ဘီးစပြီးကျွန်တော့်လိပ်စာတောင်းလာတဲ့အခါသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမေးတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ အိုကေ၊ မင်းငါ့ကို ဦး ထုပ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပို့ချင်လား။ (ဆဲလ်ဖုန်းမှအီးမေးလ်သံ) (တံခါးကိုခေါက်ပါ) ဒါကကြီးမားတဲ့ ဦး ထုပ်ပါပဲ။ ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်သူတို့ငါ့ကိုငါ့ကိုစက်ဘီးတစ်စီးပို့ပေးလိုက်တယ်။ ငါ GT လုပ်တာကိုကျေနပ်တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်တာက GT ကငါ့ကိုဒီစက်ဘီးကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောဖို့တာဝန်မရှိဘူး။ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများအပြည့်အဝတစ်ဖိုင်တွဲအတင်း - ကျွေးမွေးရကြပြီမဟုတ်, ငါဆက်ဆက်ငါ့ထင်မြင်ချက်အဘို့အနီးကပ်လခပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားလအနည်းငယ်အဘို့ဤစက်ဘီးစီးပြီးနောက်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောအကြံအစည်ဖြစ်ကြသည်။
အများအားဖြင့်ဤသည်မှာဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့စက်ဘီး၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ၎င်းတွင်ပါသောအရာနှင့်ဂျီသြမေတြီစသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ရထားစီးရမယ်။ သင် Denver တွင်နေထိုင်သည်ဆိုပါက RTD light rail ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စီးခဲ့ဖူးသည်။
သူမသည်အများအားဖြင့်အချိန်မီဖြစ်ပြီး၊ သင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာအချို့သို့မောင်းနှင်လာပြီးစက်ဘီးစီးသူများတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မတည်မငြိမ်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်လုံလောက်သောနေရာမှထွက်ခွာကြသည်။ ငါဒီစက်ဘီးနဲ့ရထားစီးနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ GT ကစက်ဘီးတစ်စီးသာပိုင်ဆိုင်နိုင်သူ၊ တစ်ပတ်အတွင်းမှာမြို့တစ်မြို့ကိုလည်ပတ်နိုင်ဖို့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလမ်းတွေပေါ်မှာသွားနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာလို့ GT ကပြောတယ်။ ဒီစက်ဘီးပေါ်အိတ်ထိန်သိမ်းပူးတွဲအချက်များပေးသည်။
အကယ်၍ သင်လိုအပ်လျှင်သိုလှောင်မှုပိုလိုသည်၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်သင်အပြည့်အဝဖြစ်မည်ဟုဆိုလျှင်ထိန်သိမ်းခြင်းကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခရီးသည်များအနေဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောလမ်းများပေါ်တွင် GT-grade စွန့်စားမှုဆိုင်ကယ်မှလာသည့်ဒီဇိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်။ ထိုင်ခုံတည်နေရာကိုတိုက်ရိုက်အပေါ်မဟုတ်ဘဲထိုင်ခုံပြွန်၏ရှေ့မှောက်၌ welded နေကြသည်။
ဤသည်ထိုင်စကားရပ်တန့်ဖို့ပဲအလုံအလောက်ရုံတင်နိုင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ စက်ဘီးစီးလာမည်ကိုစိုးရိမ်သောသူများအတွက် GTGT က ၄ င်းသည်ပေါင် ၃၃၀ အထိခံနိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ဒါတကယ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်သံသယဖြစ်ခဲ့မိပေမယ့်လမ်းကြမ်းပြင်မှာအမှန်တကယ်ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်လို့ပြောဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကဒီထက်ပိုပြီးအရွယ်အစားရှိတဲ့သံမဏိဆာဆာ vaya ပါ။ တာယာ
ကောင်းပြီဒါနဲ့ငါရုံးကိုအဆင်ပြေစွာသွားခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့ကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်စက်ဘီးအများစုကကျွန်တော့်ကိုအလုပ်လာခေါ်ဖို့အခက်တွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကတကယ်ကိုလား? ခရီးဝေးစက်ဘီးကိုစိတ်ထဲထည့်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပေါ့။ အဲဒါကသူတို့ဟာအလွန်အကျွံအလျှော့ပေးလိုက်လျောလိုက်တာပဲ။ Floyd Hill သည် Denver ဒေသခံများနှင့်အမြဲရေပန်းစားသည်။ သို့သော်ယနေ့လူတိုင်း The Sleuth ဟုခေါ်သောလမ်းကြောင်းသစ်သို့သွားနေကြသည်။ ဆွိုင်း။ - သော့ခတ်လိုက် - သော့ခတ်! - အပိုင်း ၄ အဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းသည် Diamond ပန်းခြံရှိလိုင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲဒေသခံများလာပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောတစ်မိုင်ခန့်အပ်နှံထားသောကုန်းကြောင်းအပိုင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာရေခဲတောင်ဘယ်လောက်အသုံးချနိုင်လဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။ အခုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုစတော့ရှယ်ယာအများအားဖြင့်စက်ဘီးနဲ့သွားမယ်။ ငါပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကခြေနင်းပဲ။
စက်ဘီးစီးတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာခြံထဲထည့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုလိုအပ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့မဆင်းမှီငါတို့သွားရကြမည်။ စက်ဘီးမှာ 1x10 drivetrain ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်မသေချာသေးသောကြောင့်အကွာအဝေးအလုံအလောက်မရှိနိုင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်၎င်းမှာများပြားလှသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအပိုကင်မရာအပိုပစ္စည်းများစွာလည်းပါရှိသည်။
ဒီမှာကော်လိုရာဒိုရှိလမ်းကြောင်းကယ့်ကိုခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ချောင်ရနိုင်သည်။ အခုတော့အနည်းငယ်ဖုန်ထူနေပြီဆိုတော့ဒီစက်ဘီးပေါ်ကလာတဲ့ WTB Ranger တာယာတွေကတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အမှန်တကယ်လွတ်နေသောအပိုင်းကိုထိလျှင်၊ သင်ချုပ်ကိုင်မှုကုန်ဆုံးသွားလျှင်ချက်ချင်းလက်ငင်းဆုံးရှုံးသွားလျှင်သင်၏ပစ္စည်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ထပ်မံ၍ စက်ဘီး၏နောက်ဖက်ကိုပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ဒီဇိုင်းသည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါတကယ်သဘောကျသွားတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်အပြည့်အဝရပ်ဆိုင်းထားသည့်စက်ဘီးစီးရန်မသင့်တော်သော်လည်း၊ သင်သည်စက်ဘီးကိုပြန်တက်ပြီးအချို့သောအပိုင်းများကိုစီးနင်းလိုက်ပါကကူညီနိုင်သည်။
ဒါဟာလမ်းကြောင်းကိုချောမွေ့စေသည်။ ကောင်းပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိပ်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးလုပ်ခဲ့ပြီးစက်ဘီးကိုဘယ်လိုတက်သွားသလဲဆိုတာကိုပြောဖို့လုံလောက်ပြီ။ မင်း (စွမ်းအင်ပြည့်ဂီတ) wow သူတို့အားရော့ခ်အင်္ဂါရပ်များဒီတစ်ခု Trail အပေါ်အလွန်အေးမြဖြစ်ကြသည် wow ။ အိုကေ၊ ဒါကဒီစက်ဘီးအတွက်တကယ်ကိုစိတ်အားတက်ကြွစေတယ်၊
ငါ့ကိုတကယ်စိတ်ပူစေတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှ။ wow, ဒါပေမယ့်နီးပါးထွက်ဆေးကြောပြီးလျှင်။ တာယာများသည်ချုပ်ကိုင်ထားရန်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးထိုလမ်းဆုံလမ်းခွသည်အတိတ်ဆုံးမဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတာကငါဟာအလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားတဲ့အနက်ရောင်စိန်တစ်ခုတည်းကိုစီးပြီးစီးလာတာပါ။ ၈၂၅ ဆိုင်ကယ်၊ ဒေါ်လာ ၈၂၅ စက်ဘီးတစ်စီးထဲထည့်လို့ရတယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတစ်ခုတည်းကပိုကောင်းတဲ့ခြေနင်းကိုတင်တာပဲ။ အလွယ်တကူလွယ်ကူစွာဤတာယာများသည်ထိုအရာအတွက်သာရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အိုးဘရိတ်၊ ဘရိတ်အလုပ်လုပ်ချင်ပေမယ့်တာယာတွေကမလုပ်ပါဘူး။ ဒီတာယာတွေကဒီစက်ဘီးကိုနောက်ပြန်ဆွဲနေကြတယ်။
အို! ဒါလွယ်ပါတယ်။ အိုဟုတ်တာပေါ့! ငါဥယျာဉ်ခြံလေးတွေကိုချစ်တယ် (သူကရယ်တယ်) t အိုး။ ဒါကောင်းတယ်။
ဒီလမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့လူတွေ၊ မင်းယောက်ျားတွေဟာမကောင်းတဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သူတွေဖြစ်လို့မင်းကိုငါချစ်တယ်။ (သူက ၀ မ်းသာအားရပြုမိသည်။ ) ငါမြန်မြန်မမြန်ဘူး အိုး။
အိုး၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အဆင်မပြေဘူး၊ ဒီဟာကကျွန်တော်စက်ဘီးစီးတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ငါနဲ့မရင်းနှီးခဲ့ဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားခြင်းပဲ။ လမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောရရင်၊ ဒါကအနာဂတ်အတွက်အရာရာတိုင်းအတွက်ငါ့သက်သေပြမြေကွက်အသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? တော်တော်လေးအေးမြကွင်းဆက်။ ဆိုင်ကယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်ဘာကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ ဘာကိုမလုပ်သည်ကိုသင့်အားပြောပြရန်အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်သောအကြောင်းအရာများကိုမဖုံးထားပါသနည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါသည်ဤစက်ဘီးပေါ်တွင် drivetrain ကြိုက်တယ်; ၎င်းသည်ကောင်းစွာပြောင်းလဲသွားပြီး clutch လည်းပါ ၀ င်သည်။ clutch ဆိုသည်ကိုသင်မသိပါက၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ကွင်းဆက်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Drive down section များဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကွင်းဆက်ကိုခုန်။ ဆူညံသံများစွာမဖြစ်စေနိုင်အောင်တားဆီးပေးသော်လည်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့၎င်းကိုကွင်းဆက်ကြိုးချည်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းသွားသောသံကြိုးဟုခေါ်ဆိုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စက်ဘီးကိုနှေးစေရန် Shimano Mt200 ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားစျေးနှုန်းများအတွက်တော်တော်လေးကောင်းသောမော်ဂျူနှင့်ရပ်တန့်ပါဝါကိုဆက်ကပ်။
ရှေ့နှင့်နောက်တွင် ၁၆၀ မီလီမီတာလှည့်ကွက်များပါရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘရိတ်စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါကရှေ့ rotor ကို ၁၈၀ မီလီမီတာအထိအမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ သင်ဘီးပေါ်တက်လျှင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာများနှင့်အတူ tubeless သဟဇာတမရရှိနိုင်ပါ။ သင်မည်သည့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အပိုဆောင်းဘေးဘက်မှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်သင် ၂၇.၅ သို့မဟုတ် ၂၉ ရနိုင်သည်။
ငါကပိုသေးငယ်ပြီး ၂၇၊ ၅ ရတယ်။ အလယ်အလတ်ကနေ ၂၉ အထိရတယ်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လွဲချော်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤစက်ဘီးပေါ်မှတာယာများကိုမနှစ်သက်သောသူမဟုတ်ပါ။ WTB Rangers များသည်လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းများအတွက်သာမကခရီးသည်များအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်မည်သည့်လေးနက်သောလမ်းကြောင်းစီးနင်းမှုမျိုးကိုမဆိုသင် ပိုမို၍ ရန်လိုသည့်အရာတစ်ခုအတွက်လဲလှယ်ရန်လိုပေလိမ့်မည်။
ငါကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကိုကြိုးစားလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ Maxxis High Roller II တာယာစုံတစ်ချပ်ကိုယူပြီးနောက်ထပ်စီးဖို့သူတို့ရွေးလိုက်တယ်၊ ဒါကကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုပဲ။ ပိုမိုချောမွေ့သောအပိုင်းအစများကိုလှိမ့် ၀ င်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘရိတ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလှည့်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ တကယ်တော့ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုငါရတယ်အခါတိုင်း run သောဤအလွန်ချောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်) ငါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
တွန့်သည်သင်၏မိတ်ဆွေမဟုတ်၊ သင့်ရန်သူဖြစ်သည်။ အရေးအကြောင်းကမင်းရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘဲမင်းရဲ့မိတ်ဆွေပဲ။ ဟုတ်ကဲ့! (အလင်းလက်ခုပ်သံများ) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမြေအနေအထားနှင့် ပတ်သက်၍ ဤမီလီမီတာ ၁၀၀ ကွိုင်လမ်းဆုံလမ်းခွသည်ပိုက်ဆံအတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ငါလိုအပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အထောက်အကူဖြစ်သော်လည်းလမ်းကြောင်းကိုလည်းချောမွေ့စေသည်။ သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ GT ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာအားကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သောအမေရိကန်ပြင်ပရှိဤစက်ဘီးပေါ်တွင်သင် ၁၂၀ မီလီမီတာလေကြောင်းလမ်းဆုံလမ်းခွရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းသည်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်၊ အသေးစိတ်မရှိပါ။ အခုဘောင်နှင့်၎င်းရဲ့ခံစားချက်အကြောင်းပြောကြရအောင်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်သူလို့မခေါ်ချင်ဘူးလို့မပြောခင်မှာ hardtails တွေကိုပဲကြိုက်တယ်။ ငါလက်ကိုရနိုင်သည့် hardtail အမျိုးအစားတိုင်းကိုစီးရန်ကြိုးစားသည်။ ၀ င်ငွေအဆင့်အတန်းမှကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ နှင့်သံမဏိပြားများအထိဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အတွက်အိပ်မက်စက်ဘီးအထိဖြစ်သည်။
သူကပြောပါတယ်, ငါအများကြီးမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တယ်ငါသိ၏, ဒီဘောင်၏အင်္ဂါရပ်များနှစ်သိမ့်ဆီသို့ ဦး တည်အနည်းငယ်သာဖြစ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်, သူကအနည်းငယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေမယ့် flimsy မဟုတ်, ဒါကလမ်းကြောင်းချောမွေ့ကူညီပေးသည် ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကအမာခံ hardtail လို့ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ hardcore လမ်းကြောင်းကိုစီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကမင်းအတွက်စက်ဘီးမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဤရှည်လျားသောပင်စည်ကိုကြည့်သည့်အချိန်တွင်သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်သော်လည်း
ဟုတ်ပါသည်၊ Y သည်ဤစျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိစက်ဘီးအများစုကဲ့သို့သော XC စတိုင်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ ဦး ခေါင်း၏ထောင့်သည် ၆၈.၅ ဒီဂရီရှိပြီး၎င်းသည် Pac k ၏အလယ်တွင်တော်တော်များများရှိသည်။
အရမ်းပြင်းထန်တဲ့မဟုတ်ပေမယ့်အရမ်းမတ်စောက်သော။ ဦး ခေါင်းပြွန်အကြောင်းပြောရလျှင်၊ ဤစက်ဘီးတွင် tapered head tube ရှိကြောင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာစရာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သင်၏ fork ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန် (သို့) လဲလှယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင့်တွင် fork options များစွာရှိသည်။ ဤစက်ဘီးတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အတွင်းကျသောပြန်လည်နေရာချထားရေးရွေးစရာကိုတွေ့ရ။ အလွန်ဝမ်းသာခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒီစက်ဘီးပေါ်ရှိကေဘယ်ကြိုးအများစုသည်အောက်ပြွန်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိစေသည်။ ဤစက်ဘီးတွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီး၎င်းမှာ 141 Boost ဖြစ်သောနောက်ဘက်အချက်အချာဖြစ်သည်။ ဒီဟာကို Google ဖွင့်ထားရင်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့ပါတယ်။
၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန် Boost အချက်အချာဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စံရိုးမှတဆင့်ရိုးအစားပိုမိုပါးလွှာသောရိုးကိုအသုံးပြုသည်။ အခုတော့ငါ GT ကိုဘာလို့သူတို့က standard boost hub ကိုသုံးတာလဲ၊ သူတို့ကအခြေခံအားဖြင့်ကုန်ကျငွေကိုပြောတယ်။ စတိုးဆိုင်ထိသောအခါစက်ဘီး၏စျေးနှုန်းကိုချွတ် $ 150 ။
သတင်းကောင်းမှာ Boost 141 သို့ရိုးရိုးကိရိယာနှင့်သာပြောင်းလဲနိုင်သောစျေးကွက်တွင်လျောက်ပတ်သောအရေအတွက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါမျှော်လင့်ချက် Hubover ကိုဒေါ်လာ ၁၄ ဒေါ်လာဖြင့် ၁၄၁ အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤစက်ဘီးနှင့်ကောင်းစွာကိုက်ညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤစက်ဘီး၏ဘီးတပ်စက်ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်အခြားသောစက်ဘီးသို့ပြောင်းပါကသူတို့သည်လုံးဝအသုံးမကျလိမ့်မည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
ငါသို့သော်ဤအလေးပေး။ 141 နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေမှာခင်ဗျားရဲ့အိမ်စာကိုလုပ်ပါသလား။ ဒါဆိုရင်သူတို့ကသင်မ ၀ ယ်ခင်သူတို့ဟုတ်လားသိလား။ ဒါဆိုငါဒီစက်ဘီးကိုတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားတာငါဘာလို့ငါထင်သလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ငါ့ကောင်မလေးကကျွန်တော့်ကိုတူညီတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့မေးခဲ့တယ်။ သူကစက်ဘီးသည်တြိဂံတစည်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ဒီတြိဂံတွေကိုဘာထူးခြားစေတာလဲ။ ဒီမှာပြောစရာရှိတာကတခြားစက်ဘီးတွေပေါ်မှာသင်ရှာတွေ့နိုင်တာများတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါ့မျက်လုံးကိုတကယ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်ဘက်ကွင်းဆက်ဒီဇိုင်းပဲ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏နောက်တာယာဖိအားများကိုစစ်ဆေးရန်ရပ်တန့်သည့်အချိန်များရှိသည်။ မဟုတ်ပါ၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချောချောမွေ့မွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်မှားသည်ဟုထင်မိသည်။
အခုတော့စက်ဘီးစီးရတာအရမ်းတင်းကျပ်တဲ့အလုပ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အပြင်လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝရိုးရိုးသားသားပြောနေတယ်၊ ​​သူတို့ကဒီဒီဇိုင်းစိတ်ကူးကိုမကြိုက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ထင်ထားတာထက်ဒီထက်ပိုပြီးရန်လိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသင်စီးနင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစက်ဘီးအတွက်အရာတော်တော်များများရှိလို့ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
GT ကငါ့ကိုစမ်းကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ငါမင်းဟာမင်းရဲ့စာရင်းထဲမှာပဲရှိသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်တော့မင်းအတွက်သင့်လျော်တဲ့စက်ဘီးကိုမ ၀ ယ်ခင်အိမ်ကိုပြန်မပို့ခင်မှာအဲဒါကိုငါကြိုးစားခဲ့တာ။ ဒါက GT, ကြီးတယ်။
ငါသို့သော်တ ဦး တည်းနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရှိသည်။ ဒါကကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ Avalanche နဲ့ GT sensor ကြားမှာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ရှိတယ်။ နောက်လာမယ့်နှစ်မှာဒီပျက်ပြားမှုကိုဖြည့်ဖို့ကယ့်ကိုပြင်းထန်တဲ့ hard core hardtail ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ GT မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးဘဝကကျွန်တော့်ကိုစက်ဘီးဆိုင်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။
သင်ဤစက်ဘီးကိုစဉ်းစားမိသောအရာများအတွက်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်ကိုချန်ထားပါ။ ၎င်းသည်ဖျော်ဖြေမှုသို့မဟုတ်အထောက်အကူပြုပါကဤဆောင်းပါးကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်မျှဝေပါ။ မည်သည့်စက်ဘီးပဲရှိပါစေ၊ မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်ပါစေသင်၏စက်ဘီးကိုနောက်တစ်ကြိမ်မတိုင်မီအထိသိမ်းထားပါ၊ အပြင်ကို ထွက်၍ သင်၏နောက်စွန့်စားမှုတစ်ခုကိုရှာပါ။
ငါဘယ်အရွယ်အစားအောက်ခြေ bracket ကလိုအပ်ပါသလဲ?
ထွက်ရှာရန်အရွယ်အစား၏အောက်ခြေ bracket ကလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်, အတွင်းပိုင်းကိုတိုင်းတာအောက်ခြေ bracket ကသင့်ရဲ့ frame ထဲမှာ shell ကို, က 73mm, 70mm သို့မဟုတ် 68mm ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့သောအဟောင်းဘောင်များတွင်အီတလီချည်မျှင်ရှိသည်အောက်ခြေကွင်းခတ်အစားခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်ထက်
စက်ဘီးစီးသည့်inရိယာအတွင်းရှိသင်၏မေးခွန်းနှင့်ပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုလိုသည့် gcn နည်းပညာဆေးခန်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ သင့်လူမှုရေးမီဒီယာပေါ်ရှိထင်မြင်ချက်များအပိုင်းရှိ hashtagaskgcntech ကို အသုံးပြု၍ သင်၏မေးခွန်းများကိုတင်ပြနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းကမြို့တော်ဝန်ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးစီးသူတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူတို့ကဆပ်ပြာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မိုးတိမ်အစက်လေးတွေနဲ့ကြက်ညှီတွေမညှိုးနွမ်းသွားဘူးလို့စွပ်ပြဲတွေပိတ်ဆို့တာကိုခံလိုက်ရတဲ့မြို့တော်ဝန်ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးစီးသူတွေကမေးလာပါတယ်။ သူတို့ကိုအချို့သောအရာဝတ္ထုများသည်ကြိုးတစ်ချောင်းကဲ့သို့အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်မောင်းနှင်သည့်အချက်များ၊ သင်မောင်းနှင်သည့်အခြေအနေများ၊ သင်မောင်းနှင်နေသောလမ်းများသည်သင်ရာသီဥတုနှင့်မည်မျှသန့်ရှင်းသည်ကိုမူတည်သည်။ စက်ဘီးပေါ်တွင် system အလေးချိန်မည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုသင်မည်မျှကောင်းကောင်းသိပါသလောသင်အမြောက်အများကိုစီး။ စီးခဲ့ပါကအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စီးနင်းမှုများပြီးနောက်သင်၏အနားကွပ်များကိုပွတ်သပ်။ ပွတ်ပေးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်မှုန့်အမှုန်တွေကပ်ငြိနေရင်သူတို့ဟာသူတို့ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့စက္ကူတစ်မျိုးလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အနားကွပ်မျက်နှာပြင်နဲ့ကျောက်ခင်းလမ်းပေါ်မှာပိုပြီးပွန်းပဲ့နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ BEC disc ကိုဘရိတ်နှင့်အတူစက်ဘီး ဒါ့အပြင်ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ discs များနှင့် pads များကိုပြုပြင်ခြင်းဟာဘီးတစ်ခုလုံးအစားထိုးရန်ထက်ဈေးပေါသည်။ နောက်မေးခွန်းမှာ Camucho မှဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အောက်ခြေခုံးသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှိုက်သရိုက်ဆူများလုပ်မိလျှင်၊ ငါ့ကိုအလယ်၌ရပ်တန့်ပစ်မည်လောဟုသူပြောခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်အဲဒါကိုမင်းရဲ့အလယ်မှာမရပ်ဘူး။
အောက်ခြေ bracket ပျောက်သွားလျှင်သင်အိမ်၌၎င်းစီး။ စီးနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်ဝက်ဝံ၌ကစားခြင်းများစွာရှိသဖြင့်သင်၏အောက်ခြေ bracket သည်မရှိတော့သည်ကိုသိရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာပေါ်လာတတ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆူညံသံ။ ဒါဆိုသင့်ရဲ့ crank လက်မောင်းကိုနောက်တစ်ခါရွှေ့ရင်မင်းကအဲဒါကိုတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ တကယ်တော့ပြဇာတ်နည်းနည်းလေးကဒီဟာကဒါကိုပြင်ဆင်ပြီးအစားထိုးသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အသစ်သော bearings များလိုအပ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းပြချက်မှာချည်ကြိုးချထားမှုသည်ပျော့ပျောင်းသောအခါအနည်းငယ်ရွေ့လျားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်စီး။ မသွားလိုလျှင်သင်ကွင်းဆက်ကိုချန်ထားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကကုန်းနှီးထားလျှင်သင်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်။ သင်၏ဂီယာများသည်လည်းကောင်းစွာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ ဆူညံသံကိုသာပြုလုပ်လျှင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာဖြုတ်ခြင်း၊ စောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်စုစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဤအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့များစွာပြောဆိုသည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ creaking ဆူညံသံများနှင့်ဆူညံသံများကိုပြုလုပ်ပါ၊
ဒါ့အပြင်ဒီဆူညံသံတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အောက်ခြေခုံမှာသေချာပေါက်မှန်ကန်ကြောင်းသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရစက်ဘီးတွေအများကြီးရှိတဲ့အခြားယောက်ျားလေးတွေကိုခင်ဗျားသိလား။ ကျနော်တို့ကျိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အောက်ခြေကွင်းခတ်ကနားကြပ် (သို့) crank လက်မောင်းဒါမှမဟုတ်သင်စက်ဘီးရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာခြေနင်း ၀ င်ရိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်။ Brucelangsteiner မှနောက်ထပ်အောက်ခြေကွင်းခတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသူကပြောကြားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဂန္တ ၀ င်သံမဏိကိုယ်ထည်ကိုအောက်ခြေ bracket အားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ frameis Italian တွင်ဤသည် One သည် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ အခုပြtheနာကသင့်မှာသံမဏိကိုယ်ထည်ဟောင်းတစ်လုံးရှိရင်အောက်ခြေ bracket ကတကယ့်ဘောင်ထဲကိုထည့်သွင်းသွားမှာပါ။ ကာဗွန်ဘောင်ဖြင့်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ဤဘောင်သို့သွားပါ၊ အောက်ခြေကွင်းခတ်မှချည်များသည်အီတလီဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်အရေးကြီးသည်။ အောက်ခြေ bracket ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ချည်များဖြင့် bsabottom mount ရှိသည်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ အောက်ခြေ bracket ၏သင်ခြေနင်းသည်ယခုလက်ရှိဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ခြေနင်းများတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ချည်များနှင့်တူသည်။ ခြေအောက်ခြေကွင်းခတ်အဟောင်းဒီဇိုင်းသူတို့အောက်ခြေကွင်းခတ်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တူညီသောလက်ယာချည်တစ်ခုရှိသည်။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မတူညီတဲ့အောက်ခြေ bracket ကိုဒီချည်ထဲမထည့်နိုင်ဘူး၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ aholotech shimano cranksets အတွက်သင့်တော်တဲ့အီတလီအောက်ခြေကွင်းခတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် pinarello ကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အီတလီအောက်ခြေကွင်းခတ်များနှင့်ပါ ၀ င်သောခေတ်သစ် pinorellos သည်ကျွန်ုပ်၏စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော Shimanoholotecchain အစုံကိုထုတ်ယူလိုက်သည်။ ယင်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းတွင်စက်ဘီးသိုလှောင်ရန်အကြံဥာဏ်များအကြောင်းပြောပြသည့်ကီဗင်ဝဲဒိုမှလာမည့်မေးခွန်းများနှင့်စကြစို့ Pende ln သို့လည်းအလွယ်တကူသွားလာရန်လွယ်ကူသောတိုက်ခန်းငယ်တစ်ခန်းသက်သာသွားသည်။ ဤသည်မှာလူတော်တော်များများကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်ပြanနာဖြစ်သည်။ ငါတိုက်ခန်းတစ်ခုတွင်နေပြီးမီးဖိုအထက်ရှိနံရံပေါ်၌စက်ဘီးကိုရပ်လိုက်သည်။ နေရာတွင်ကိုင်ထားသည့်နံရံသည်အလွန်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သည်။ သင်စက်ဘီးစီးသည့်အခါအထူးသဖြင့်ကောင်းသည်။ ၊ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ပြီးသင့်မှာစက်ဘီးကောင်းကောင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်နံရံပေါ်ရှိအနုပညာလက်ရာတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းအောင်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းမဟုတ်လျှင်သင့်အိမ်ရှင်နှင့်စစ်ဆေးပါ၊ နံရံ၌တွင်းတူးရန်မသေခင်၊ အကယ်၍ နံရံတွင်အပေါက်များကိုမတူးချင်ပါကအခြားရွေးချယ်စရာများအပြင်တံခါး၏နောက်ကျောတွင်သင်၏စက်ဘီးကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်တံခါးနောက်ဘက်၌ ကပ်၍ ချိတ်ထားနိုင်သောချိတ်များရှိပါက၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုရှိသည်။ တကယ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးအောက်ခြေမျက်နှာပြင်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်အကြားတပ်ဆင်နိုင်သည့်လှံတံနှင့်တူသော touchgo ရပ်တည်မှုကိုပြုလုပ်သော gcn အစုံတွင်သင်က၎င်းကိုဝက်အူများဖြင့်တင်းကျပ်နိုင်သည်။ သငျသညျ hol တူးဖော်ချင်ကြဘူးလျှင်အရာလည်းအလွန်လျောက်ပတ်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ် es သင်၏တိုက်ခန်းများ jrg 106underscore၊ မှောင်မိုက်။ မိုးရွာနေချိန်တွင်စက်ဘီးမျက်မှန်များဝတ်ဆင်ရန်ခက်ခဲကြောင်းပြောကြားခဲ့သည့်ထူးခြားသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှန်ဘီလူးများပေါ်ရှိမိုးရေများကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားခြင်းကဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုကာကွယ်ရန်အကြံဥာဏ်များရှိပါသည်။ မိုးရွာစေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောမှန်ဘီလူးများပေါ်တွင် hydrophobic အပေါ်ယံပိုင်းကောင်းသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်ကရွာသွန်းသည့်နေရာတွင်ရွာသားများတွေ့ရလျှင်၊ ဂန္ထဝင်၊ Perryroubaix နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော၊ ဦး ခေါင်းနောက်ဘက်သို့မဟုတ်သံခမောက်လုံးတွင်ထည့်ထားခြင်းကြောင့်မျက်မှန်တွင် windskield wiper မပါရှိခြင်းကြောင့် hydrophobic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပေါ်ယံအင်္ကျီများဖြင့်ပင်အမှိုက်နှင့်ရေကပ်လျှက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမြင်တွေ့ရစေသည် ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီထက်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာတစ်ခုတော့မရှိပါဘူး၊ တကယ်ဆိုးတာပေါ့၊ ကျွမ်းကျင်သူအများစုကမင်းရဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမျက်မှန်ပေါ်က hydrophobic coating နဲ့စမ်းသပ်ပြီး၎င်းကိုခံနိုင်အောင်အစွန်းအထင်းများအောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့လည်းမရှိ မင်းမျက်မှန်တွေထဲမှာအလားတူတစ်ခုခုမတပ်ဆင်နိုင်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးနေတာပါ။ ဒီတစ်ပတ်မှာ Eclipselex ကနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့သူကကြည့်ရတာလေ့လာရတာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ Pinarello 2004 အံ့သြဖွယ်ဘောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ် အဲဒီမှာ semi-vertic dropout ရှိပြီးညှိနှိုင်းမှု screw တစ်ခုက voltage tensioner ကိုမသုံးပဲမြန်နှုန်းတစ်ခုတည်းနဲ့လည်ပတ်နိုင်စေတယ်။ သင် semi-vertic dropout ကိုမမြင်ဘဲပြောတာကသင်ဟာ horizontal dropout လိုအပ်တယ်။ မြန်နှုန်းနည်းသောစက်ဘီးတစ်စီးသည်သင့်အားကွင်းဆက်တင်းမာမှုကိုရရှိစေရန်နောက်ဘီးကိုအပြင်သို့လျှောထွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နောက်ဘက်လှည့်စက်အားကွင်းဆက်တင်းမာမှုကိုဖြစ်ပေါ်ရန်မရှိလျှင်၊ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကလွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူမေးခွန်းတစ်ခုကိုနည်းပညာဆေးခန်းတစ်ခုတွင်ဖြေကြားခဲ့သော်လည်းသင်စမ်းကြည့်။ သင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်မဖြစ်နိုင်ပါ သင်ကွင်းဆက်တင်းမာမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်ကွင်းဆက်တင်းမာမှုကိုအသုံးမပြုလိုပါကအကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုမတိုင်မီနှင့်အတူသင့်အနောက်ဘီး၌မတူညီသောဗဟိုချက်မလိုအပ်သည့်လုံလောက်သောတင်းမာမှုကိုဖန်တီးသောမတူညီသောအချက်အခြာသို့သွားခြင်းနှင့်အတူတူပင်အဖြေသည်အတူတူဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ ဤသီတင်းပတ်အတွင်းနှင့်ဆောင်းပါးများရှိမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ သင်လိုင်းကိုထောက်ပံ့လိုပါကသို့မဟုတ် gcnapron ရယူလိုလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ gcn ဆိုင်သို့သွားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဝန်များရှိသည်။
Giant သည် Trek ထက်သာလွန်သလား။
စျေးနှုန်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်iantရာဒီထက်စျေးကြီးသည်Trek ထက်။ သူတို့ဘယ်မှာထုတ်လုပ်သလဲ၊iantရာ၎င်း၏စက်ဘီး၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအနိမ့်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ခြေကျင်ခရီးစက်ဘီးများသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေစွာစီးနင်းနိုင်သော်လည်းစီးနင်းသူများ၏ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၀ ယ်ရန် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
GTCwondow, Schwinn, Mongoose, IronHorse, DYNO နှင့် RoadMaster တို့ကိုလည်းရောင်းချသောကနေဒါလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သော Dorel Industries ၏ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။စက်ဘီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အားလုံးအာရှမှာထုတ်လုပ်။ ထိုလုပ်ငန်းစုကြီးသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဒေဝါလီခံရပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Dorel Industries မှဝယ်ယူခဲ့သော Pacific Cycle မှဝယ်ယူခဲ့သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်အများဆုံးကွမ်းခြံကုန်းလုပ်နိုင်အမျိုးမျိုးမှတပ်ဆင်ရမည်အောက်ခြေ bracket ကဤသဟဇာတဖြစ်မှုအများစုသည်သင့်တော်သောဟာ့ဒ်ဝဲရရှိနိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည် (shells) (နောက်လာမည့်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ။ မဆိုသဟဇာတမလုပ်တယ်ထကြဖြစ်ကြသည်မကြာခဏအရှည်နှင့် / သို့မဟုတ်အချင်းဆက်စပ်ကျောက်တံတားရိုး။
ဘယ်လိုအရွယ်အစား crankset ကို ၀ ယ်ရမလဲ။
crank အရှည်: ဒီအောက်ခြေ bracket ကဝင်ရိုး၏ဗဟိုကနေနင်းရိုး၏ဗဟိုမှတိုင်းတာသည်။ အများစုမှာစတော့ရှယ်ယာစက်ဘီးရှိသည်cranks၁၇၀ မီလီမီတာ (သို့) ၁၇၅ မီလီမီတာအမြင့်ရှိသော်လည်းသူတို့ကိုသင်အနေဖြင့် ၁၄၀ မီလီမီတာနှင့် ၁၉၀ မီလီမီတာအထိရနိုင်သည်။ ရွေးချယ်ပါကျောက်တံတားသင်၏အတွင်းပိုင်းခြေထောက်တိုင်းတာမှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်မှု။
iantရာဝင်ငွေအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစက်ဘီးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီသည်စက်ဘီးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြင့်ရောင်းချပြီးအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ထုတ်လုပ်သည်ခြေကျင်ခရီး, Scott နှင့် Colnago ။08.30.2013
ဘာကြောင့်လဲစက်ဘီးစီးခရီးဒီတော့စျေးကြီး? တစ် ဦး ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစက်ဘီး၎င်း၏ဘောင်သည်။ အများကြီးနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်ဤအဆင့်မြင့်တည်ဆောက်ခြင်းသို့ဝင်စက်ဘီးပတ်ပတ်လည် $ 10,000 စျေးနှုန်း။ ထုတ်လုပ်သူများသည်ဤကုန်ကျစရိတ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားစေနိုင်သည်စက်ဘီး$ 1000 $ 2000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှာစျေးနှုန်း။
GT Avalanche 2.0 သည်ငွေနှင့်ထိုက်တန်သလား။
စက်ဘီးစီးသူများစွာသည် GT Avalanche 2.0 ကိုသင့်ငွေနှင့်လုံးဝထိုက်တန်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံး Hard-tail ဆိုင်ကယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်ဆိုသော်လည်း၎င်းကိုမထင်ထားသူအချို့ရှိသည်။ Avalanche 2.0 သည်စက်ဘီးဖြစ်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘဲမည်သည့်လမ်းကြောင်းမှမဆိုသင်လျှောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Avalanche 2.0 ဟာတောင်ကြီးတောင်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်ပါသလား။
ဆွဲဆောင်မှု၊ ဆိုင်းထိန်းစနစ်၊ အလေးချိန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူမှုတို့ကြောင့် Avalanche 2.0 ကိုမည်သူမဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်စေပြီးတောင်ကိုနှစ်သက်သူအတွက်စက်ဘီးစီးသည်။ Avalanche 2.0 သည်သက်တောင့်သက်သာမရှိသောစက်ဘီးမဟုတ်ပါ၊ မတော်တဆမှုအချို့ကိုသင်ကြောက်ရွံ့စေမည့်စက်ဘီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။
GT Avalanche Mountain ဆိုင်ကယ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
၃၃ ပေါင် (၁၅ ကီလိုဂရမ်) ကျော်ရှိသည့်အတွက် GT Avalanche ၏ပုံစံသည် Elite အမျိုးအစားတွင်ဖော်ပြထားသောတောင်ကြီးတောင်ငယ်အတွက်လေးလံသည်။ စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည် frame, fork သို့မဟုတ်အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှကမ်းလှမ်းသောကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။